တူဒါ နဲ့ မတူဒါ Su – Sein | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » တူဒါ နဲ့ မတူဒါ Su – Sein
တူဒါ နဲ့ မတူဒါ Su – Sein
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 2, 2015 in Myanma News, Opinions & Discussion | 11 comments
ဘွားဒေါ်ဂျီးနဲ့ သမဒဂျီးတို့ မိတ်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်တွေ အင်တာနက်မှာ ဖတ်လိုက်ရသဗျ။ ဘွားဒေါ်က ဟင်္သတ၊ ပြည်ဖက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်တရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ခရီးထွက်၊ ဘပြောင်ဂျီးက လပတ် မိတ်ခွန်း ရေဒီယိုမှာ လေပွားဒါ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက် တူတာ မတူဒါလေးဒွေ အူးနှောက်လေမုန်ဒိုင်း တိုက်ချဉ်ရို့၊ ရွာထဲမှာ သူတို့ဘာလုပ်လုတ် မှန်ပါ့ဖျားဒွေ တဘုံဂျီးမှတ်လား….။
မြင်လို့လွဲအောင် ဘပြောင်သမဒ ဖြစ်လာချိ်န်ကစ ယဉ်ကြည့်ရအောင်စ်။ နျှောက်စလုံး လေပွားဒါခြင်း တူအိ၊ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မရှိ.. ဝေဝေဝါးဝါး.. ယေဘူယျ စကားလုံးတွေချည်း..။ တိုးတက်အောင်လုပ်၊ လာဘ်မစားနဲ့၊ တရာအုပဒေ ဆိုးမိုးယေး၊ ဒိုတာဝံ အယေးသုံးဘား၊ ပြည်သုဘွခေါင်းစားရေ.. ကွိကွိ ကွကွ။ လှလိုက်တဲ့ စာလုံးဒွေ.. လက်တွေ့ ပြေးကြည့် နတ္ထိ.. အသံသာရှိ အဆံမရှိ.. အဟိ အဟိ ခွိခွိခွိ။
မီတူဒါကြတော့.. အဲဒမှာ ထင်ရှားသွားဒယ်။ ဘပြောင် အစိုးမရက တကယ်လုပ်တယ်၊ သူတို့ အာဏာတည်မြဲဖို့၊ အချုပ်အခြာ အာဏှာတီမြဲယေးစိုပီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး ဆေးအကုန်ထိုးတယ်။ ဘုန်းကြီး၊ ကျောင်းသား၊ လယ်သမား၊ အလုပ်သမား၊ ပြည်သူ ဘာမှ မချန်..။ ပြည်ပရန် အော်ပီး လက်ဖြန့်တောင်းစားဖို့ ဝန်မလေး၊ ရှိသမျှ သယံဇာတ ထိုးကျွေးဖို့ ဝံမလေး..။ ဒီတော့ လူတွေက ကြောက်တယ်၊ ရွံတယ်။ ကြောက်တာက ပိုကြီးတော့ လေနဲ့သာ ရွံပီး ခေါင်းငုံ့ခံဂျရောစ်..။ အဲဒမှာ တဂယ်ထွက်လုပ်သူ၊ ဆန့်ကျင်သူတွေ တပ်ပျက်ကရော။ ကြောက်တယ်ဆိုတာ သူတို့အားကြီး ရက်စက်မှန်းသိလို့ ကြောက်တာ၊ ကိုယ့်ဖက်က မသေခြာလို့ ကြောက်တာ၊ သားရေးသမီးရေး အကြောင်းပြ ကြောက်တာ၊ မိဘမောင်ဘွား ဒုက္ခရောက်မှာကြောက်တာ၊ ကိုယ့်အထုပ်ထည် ပျက်မှာ ကြောက်တာ၊ လက်ရှိ သေခြာနေတာလေး ပျက်ဆီးမှာ ကြောက်တာ၊ မသေချာတဲ့ အနာဂတ် အသစ်ပျံဆရမှာ ကြောက်တာ…။
လအဲဘု သရဲပြု ခဲထု ဆွဲလု
ဘွားဒေါ်လည်း လေအစုံပွားပါရဲ့၊ မတရားတာကို လက်သင့်မခံနဲ့ အတိအလင်း ဆန့်ကျင်ပါ၊ အကြောက်တရားမှ ကင်းလွတ်ပါ.. အာဃာတ မထားပါနဲ့.. ကွစိ ကွစ ပိစိ ပစ။ သို့သော် အနောက်က ဘယ်လို ထိန်းကျောင်အုပ်စီးမည်လည်း လက်တွေ့ အစီအစဉ် မဲ့လေဒေါ့၊ မချမှတ်နိုင်လေဒေါ့.. ဒကယ်လိုက်နာ စွန့်လုပ်ပေးသူများ မတရား အဖိအနှိပ်ခံရတဲ့အခါ မကယ်နိုင်.. လက်ပိုက်ကြည့်နေသလို ဖြစ်ရော။ ထင်းရှာတဲ့ ဥမပါအနေနဲ့ ခြေဥပြင်ရေး လက်မှတ်ထိုးလို့ ထောင်ကျတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတပ်က ဗိုလ်မှူးအဖြစ် သက်သေရှိတယ်။ ဘာလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သလဲ.. နောက်ဆုံးဗျာ သူပြောလို့ အလုပ်ပြုတ်တယ်ထားဦး ထောင်တန်းမကျ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ ဘယ်ကယ်လို့ရမည်လဲ တပ်တွင်းကိစ္စ.. ပီးဒေါ့ ဟိုက အခြားအမှုကပ် အဆော်ခံရတယ်ဆို.. အပြစ်လျှိယင် ဘယ်သူမှ မလွတ်ဗျုိ့။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်.. နောက်ဆုံး ဘိ်န်းပစ်ဖမ်း၊ ချဲစာရွက် ပစ်ဖမ်းလို့ရတယ်။ ဒီလိုပဲ မြေသိမ်းအမှု၊ အသတ်ခံရတဲ့ ကိုပါကြီး၊ လက်ပံဒေါင်းတောင်သူ ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ ကချင်ဆရာမနှစ်ယောက်… များစွာ များစွာ…။ မတရားတာကို ထုတ်ဖော်ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေ အဖြိုခွင်းခံရ၊ ထောင်ချခံရတဲ့အခါ ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးသိက္ခာကျ ၊ သူပြောတဲ့စကား တန်ဖိုးမဲ့ရော။ သင်ပုန်းချေရမည် ဆိုပြန်တော့ ဘယ်အထိလည်း အချိန်ကန့်သတ်ချက် မရှိ။ အဲဒေါ့ စစ်တပ်က နေမြဲ၊ စာမြဲ၊ နှိပ်စက်ကလူပြုမြဲ.. ကြောက်လို့ ကြောက်ရမှန်း မသိ၊ ဘွားဒေါ်ကိုလည်း တန်ဖိုးထားရမှန်းမသိ.. အခွင့်အရေး ဖမ်းဆုပ်ယူရမှန်းမသိ၊ ခံရသူဖက်ကကြဒေါ့ နာမဆုံးမို့ မယုံကြည်တော့…။
အဲဒမှာ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး၊ ဝါဒဖြန့်ချီရေးတွ ကြားလျှိုသပ်ဝင်တာခံရ…။ တကယ် အလုပ်မဖြစ်သူနဲ့ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် စွတ်လုပ်သူ.. ကြားထဲ ပိတ်မိနေသူတွေ တဦးဦးကို ရွေးပါဆို….. ပညာရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး နိုင်ငံရေးအသိ ချွတ်ခြုံကျတဲ့ နိုင်ငံမှာ အချိန်နီးကပ်လာလို့ ယခုထက်ပို ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအား သက်ရောက်လာဒဲအခါ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်နိုင်ဗါ့ဒေါ့မလား.. စဉ်းစား…. ဟင်းဇား.. မြင်းနွား..။
စိန် စကား ကိုတော့ မယုံတော့ပါဘူး။
စု စကားကိုတော့ ယုံပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစောကဘဲ အသက် ၈၀ အဖွားအိုကြီး ကို မြေကျူးကျော်မှု နဲ့ ထောင် တစ်နှစ်ချ လိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းကြည့်လိုက်ရတာ စိတ်ထဲ မကောင်းလွန်းဘူး။
အခုမှ မြေဝင်ဦးတယ် ဆိုလဲ ထားပါတော့။
နေနေတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ရှိပြီတဲ့။
မြန်မာပြည် ထဲ ဒါထက် မက ဥပဒေဖောက်ဖျက် နေသူ တွေ ကို တော့ လွှတ်ထားပြီး။
မိုက်ရိုင်းတာတွေ ကတော့ တိုးတိုးလာပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား တော့ တစ်ခုခု လုပ်စေချင်တယ်။
မဲပေးဖို့ ကလဲ ခြေဥ ကိုမှ မပြင်ရင် သူတို့ အသာစီး နေမှာဘဲ။
မျှတ တဲ့ ပုံစံ မရဘဲ နဲ့တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝင်ပြိုင်ဖို့ မလျှော်ကန်ဘူး လို့ ဘဲ ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဖို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး တစ်ခြား တွေမှာ အလုပ်များပြနေရင် ဒီချုပ် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သင့်ပါ။
အန်အယ်လ်ဒီ ရွေးဂေါက်ပွဲ အောင်နိုင်ယေး ကော်မတီ (ဗျိတိမ် ဌာနဂွဲ) ငှက်ကထ တီမြစပဲရိုးကွ…
ဧ​ဘော့​လေ ခီးဂျီးဂ အ​မေဒစ်​ကံ မှာ ​နေဒါချို​ဒေါ့ ​ပေါအာချိဒါ​ဘော့
ယုံလို့ မရမှန်း သိခဲ့ရတာက ၁၉၆၂ – ၂၀၁၅ (ဒါတောင် စားထားရတဲ့သူတွေက ဆက်ယုံချင်နေကြတယ်)
ယုံရမယ်လို့ ယုံကြည်ရတာက ၂၀၁၅ – (ဒါတောင် မသေချာ)
စု ကို မဲပေးဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ယုံတယ်။
၈၈ နဲ့.. အခုခေတ်အခြေအနေဘယ်လောက်ကွာသွားသလည်း.. မသိတာလိုက်လို့.. ကိုရင်ကြောင်ရာ…။
ဆက်တွန်း..ဆက်တွန်း… ဆက်တွန်းနိုင်သူတွေ.. ဆက်တွန်း..။
.တစ်မျိုး ကြီးပဲ။ ဒီအခြေအနေအထိ ရောက်လာတာ အမေစု အစွမ်းလို့ မထင်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့အစွမ်းလို့မှ လည်း မထင်ဘူး။ အာရပ်နွေဦးကြောင့် စစ်အစိုးရ သူတို့ဖာသာ ဖင်ကျိန်းပြီး ကဒါဖီ လမ်းစဉ် လိုက်ရမှာ ကြောက်တာရော၊ တခြား ပြည်သူတွေ မသိနိုင်သေးတဲ့ တိုင်းပြည့်ဒုက္ခ တွေ ညပ်ပူးညပ်ပိတ် ဖြစ်နေတာကြောင့်ရော၊ သူတို့ဖာသာ ဖင်ကျိန်းပြီး နောက်နည်းနည်း ဆုတ်ပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် သဘောသဘာဝအတိုင်း လူဆိုတာ နောက်ဆုတ်ပြီးရင် ရှေ့ပြန်တက်ဖို့ ခက်တယ်။ အဲဒီတော့ ရှေ့ပြန်တက်ဖို့ ကြိုးစားနေမှာပဲ။
.ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့တုန်းက အင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာ့အချက် ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ကြတာ။ အခုလည်း ဒီလမ်းစဉ်ပဲ လိုက်ရမှာကို။ အစိုးရအခက် ပြည်သူ့အချက် ဆိုပြီး။ ဗိုလ်ချုပ်တို့တုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေကို တိုက်ပြီး လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့ကြလို့လား။ အခုကော စစ်အစိုးရကို တစ်တိုင်းပြည်လုံးက အုံကြွပြီး ရီဗော်လူးရှင်းစစ်စစ် တိုက်ပွဲဝင်ပြီး ဖြုတ်ချခဲ့လို့လား။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပြ၁သနာကြောင့် အကျိုး ဆက်အဖြစ် ဖြစ်ခဲ့တာ မှုတ်ဘူးလား။
အမေစုကို အစွမ်းအစ ရှိတယ် မရှိဘူး မဝေဖန်ချင်ပါဘူး။ လူမှာ identity တန်ဖိုးဆိုတာ ရှိတယ်။ သူ့ အိုင်ဒင်တတီ တန်ဖိုးက အရမ်းမြင့်တော့ သူ့ရဲ့ တည်ရှိမှု တစ်ခုကတင် အများကြီး ထိန်းထားနိုင်တယ်။ မြန်မာပြည် အပိုင်းပိုင်း မပြတ်အောင် သူ့ရဲ့ တည်ရှိမှုက အရေးကြီးတယ်လို့တော့ ထင်မိတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သမ္မတ ဖြစ်မှ လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ မဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတယ်။
ပြုံးမမရယ်..။ ဒေါ်စုဆိုတာမရှိရင်.. မြန်မာပြည်ဒီအခြေထိရောက်ကိုနေမှာမဟုတ်ဖူးလို့.. အာမခံပါတယ်..။
စစ်အစိုးရကိုများ.. အာရပ်နွေဦးကြောင့်.. ဘာကြောင့်.. ညာကြောင့်.. လိုက်ပြောင်းမယ်ထင်နေတာကိုတော့ အံ့သြမိ…။
မြန်မာပြည်ကတော့.. ဒေါ်စုမကလို့.. ဘယ်သူတက်တက်..။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလား?.. ဒီအတိုင်းသာဆက်သွား.. လက်၅ချောင်းနဲ့.. တခါ.. ၂ခါ..၃ခါ..၄ခါ.. မဖြစ်ရေးချ..မဖြစ်..။
တစစီမဖြစ်ရင်လား.. ကံကောင်းတယ်မှတ်..။ မှတ်.။
ပါစင်နယ်မုန်းတီးမှု မနာလိုမှုများပြီး။ဘာသာရေးအဓိကထားတဲ့ဒီနိုင်ငံကို ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရတက်တက် တဟုန်ထိုးကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ကိုမရ၊
ဘာကိုဖမ်းဆုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေမှာ အမေစုကြီးဝုန်းဆို သေသွားမှာပဲစိုးနေမိ။
.အဟုတ်ပါ့ သော်သော်ရေ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတိတန်ဖိုး အိုင်ဒင်တတီက သိပ်မြင့်တဲ့အခါ သမ္မတတို့၊ ၀န်ကြီးတို့ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်က ဘာမှ သိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ image ဆိုတဲ့ စကား အမ မသုံးပါဘူးနော်။ အမေစု ကို image ကောင်းတယ်လို့ သူများတွေ ပြောသလို အမ မပြောပါဘူး။ ပင်ကို အိုင်ဒင်တတီတန်ဖိုး သိပ်မြင့်နေတဲ့အခါ နောက်ထပ်တိုးတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေက မူလဂုဏ်ကို အရောင်တောင် ပြယ်စေဦးမယ်။ အရေးကြီးဆုံးက အမေစု အသက်ရှင် ကျန်းမာလျက် ရှိနေဖို့ပါပဲ။ ဘာကို ဖမ်းဆုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ ထင်တာပါပဲ။
အမြင်တူသူရှိသေးပါလားလို့ ကျေနပ်မိ အစိမ်းပေးသွားပါတယ်မမပြုံးရေ